Etu esi eweghachi iPad / Kpọchiri Akpọchi / Nwere Nkwarụ [Ọnụego Successga nke Ọma]
Etu esi eweghachi iPad ekpochi ma ọ bụ nkwarụ [2020 High High Rate]
Jessica si Apple Community jụrụ, sị:
Echere m na m passcode na otu nke m na-abaghị uru iPad na m na-agbalị kpọghee ya ma okpu. Ugbu a nke m iPad nwere nkwarụ, Enweghị m ike ịbanye na ya. Achọrọ m iji ya ọzọ, onye ọ bụla nwere ike inyere aka? Daalụ nke ukwuu.
Ichefu passcode ihuenyo gị iPad nwere ike bụrụ ezigbo nsogbu, ọ bụrụ na ịnweghị ike icheta koodu passcode ziri ezi, ịnweghị ike ịbanye na iPad ọzọ. O nwere ike ịbụ njọ mgbe ị na-atụgharị ya na-nwere nkwarụ iPad dị ka Jessica mere ebe ị pụrụ nanị tọgharịa ndị nwere nkwarụ iPad na ike kpọghee ya ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-echeta na passcode.
ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwetaghachi ohere a kpọchiri ma ọ bụ nwere nkwarụ iPad, mkpa ka ị nhazi ya. Na ekpochi ihuenyo ma ọ bụ nkwarụ ihuenyo ga-ewepụ mgbe nrụpụta emechara, ịnwere ike ịnweta iPad ma jiri ya na-enweghị koodu passcode ochie.
Lelee ụzọ dị n'okpuru ma mụta otú iji tọgharịa gị ekpochi / nkwarụ iPad.
Otu esi eweghachi iPad ekpochi ma ọ bụ nwere nkwarụ:
Usoro 1 Tọgharia iPad ekpochi / nkwarụ site na iTunes
Usoro 2 Tọgharia iPad ekpochi / enweghị nkwarụ na-enweghị iTunes
Tọgharị ngwaọrụ gị hichapụ data na ọdịnaya niile na ya, ya mere, ị ga-aka mma weghachite iPad gị akpọchi tupu oge eruo.
Usoro 1 Tọgharia iPad ekpochi ekpochi na iTunes
iTunes bara uru ma a bido itighari iPad ekpochi ma lee uzo ị gha eme iTunes.
Ọnọdụ 1 Mgbe ị synced iPad na iTunes tupu
Ọ bụrụ na ịmekọrịtala mbadamba nkume gị na iTunes tupu, ị nwere ike jikọọ mbadamba mkpọchi gị na PC na eriri USB. Gbaa mbọ hụ Chọta My iPad is enwe nkwarụ na mbadamba, ma ọ bụghị, usoro a agaghị enyere aka.
Mgbe iTunes mara mbadamba nkume gị, gaa ngwaọrụ ma họrọ akara ngosi nke ngwaọrụ gị, wee banye Summary.
Iji tọgharịa ngwaọrụ gị, họrọ Weghachi iPad, ị na-chọrọ ịbanye gị Apple akaụntụ paswọọdụ iji gosi na weghachi.
Ọnọdụ 2 Mgbe ị na-mgbe synced iPad ka iTunes ma ọ bụ Chọta My iPad na-nyeere
Ọ bụrụTụkwasịnụ Kọmputa a”Na-egosi mgbe ị pịnyere gị mbadamba na kọmputa ma ọ bụ Chọta My iPad na-nyeere na mbadamba a, ị ka nwere ike iji iTunes, mana ịkwesịrị ịtọ iPad gị n'ime ọnọdụ mgbake.
A bụ otú ị pụrụ iji mgbake mode na iTunes iji tọgharịa ngwaọrụ gị.
Kwụpụ 1 mode Iweghachite
Iji tinye ọnọdụ mgbake, gbanyụọ mbadamba nkume gị na mbụ.
Ọ bụrụ na iPad gị nwere Bọtị ụlọ, pịa ma jide Igodo ụlọ na bọtịnụ Top, hapụ ha ruo mgbe ị na-ahụ na mgbake-mode ihuenyo, mgbe ahụ, jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri USB.
Ọ bụrụ na iPad gị nwere Nje ID, pịa ma jide Top button na Olu elu button, hapụ ha ruo mgbe ị na-ahụ na mgbake-mode ihuenyo, mgbe ahụ, jikọọ mbadamba gị na PC na iji eriri USB.
Ime nke a, iTunes ga - achọpụta iPad gị wee malite na akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2 Weghachi gị iPad
On ngwaọrụ, họrọ iPad ịchọrọ ịtọgharịa. A ngosipụta si na enwere nsogbu na iPad gị ma nyefee nhọrọ 2, update or weghachi. Ebe a, họrọ weghachi iji tọgharịa iPad gị.
Ọ ga-ewe nkeji ole na ole iji budata ngwa ngwa iji weghachi iPad gị. Mgbe ebudatara ngwa ngwa ahụ, iTunes ga-amalite iweghachi ngwaọrụ gị.
Gị iPad ga-tọgharịa mgbe iTunes kwuchara ya ọrụ. Nwere ike tinye ya na ya ọzọ.
Iweghachite mode nwere a Oge nkeji oge 15, ma ọ bụrụ na usoro ahụ dum na-ewe ihe karịrị nkeji iri na ise, mbadamba ụrọ gị ga-eme pụọ na ọnọdụ. Ikwesiri imeghari usoro niile.
> Iji usoro mgbake na-abịa na ihe egwu. Mbadamba gị nwere a 15% ohere nke araparawo na mgbake mode, ma echegbula, ma ọ bụrụ na ị bụ n'ezie na keihuojoo, ị nwere ike pịa ebe a iji idozi "araparawo mgbake mode" na "iPad nwere nkwarụ" nsogbu n'out oge.
Usoro 2 Tọgharia iPad ekpochi / Nkwarụ gị na-enweghị iTunes
Iji iTunes iji tọgharịa iPad nwere nkwarụ na-abịa na oke oke. I nwere ike ịnọ na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ na ị nwere ike tọgharịa gị iPad enweghị mgbake mode ma ọ bụ ahụmahụ nke syncing. N'ezie, enwere otu, Nkeji iPhone, kacha mma iOS resetting na unkpọghe ngwá ọrụ na ahịa.
Nkeji iPhone bụ ike software na i nwere ike iji tọgharịa gị ekpochi na nkwarụ ngwaọrụ enweghị passcode na mgbake mode. I nwere ike ime ya n'ime nkeji naanị ole na ole clicks.
Iji chọpụta otu esi eji ya, lelee nke a.
Kwụpụ 1 Wụnye Nkeji iPhone na PC gị
Nzọụkwụ 2 Ẹkedori ya ma họrọ Hichapụ passcode
Nkeji iPhone na-enye 3 atụmatụ, i nwere ike iji ndị a 3 atụmatụ dozie gị iOS paswọọdụ na passcode mbipụta.
Hichapụ passcode: kpọghee ekwt / tọgharịa gị nwere nkwarụ ma ọ bụ ekpochi ngwaọrụ mgbe ị na-echefu passcode.
Wepụ Apple ID: ihichapụ Apple akaụntụ na iOS ngwaọrụ.
Oge Ihuenyo: tọgharịa Mmachibido passcode na iDevices.
Ya mere, ebe a, iji tọgharịa gị ekpochi iPad, họrọ Hichapụ passcode, pịa Malite aga n'ihu.
Nzọụkwụ 3 Tọgharia ngwaọrụ gị
Ikwesiri ịlele ozi nke ngwaọrụ gị, pịa Malite ikwenye. Mgbe ahụ, budata ngwa ngwa iji tọgharịa ngwaọrụ gị na PC gị.
Mgbe nbudata ahụ zuru ezu, pịa Unlock, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị itinye koodu maka nrụpụta nkwenye, “0000”Na ngwanrọ. Pịa Unlock ịmalite nrụpụta.
Nkeji iPhone ga-tọgharịa ngwaọrụ gị mgbe e mesịrị, biko jiri ndidi chere.
Mgbe emegharịrị ihe, gbanye ngwaọrụ gị ma mee ya. I nwere ike inwe ya laghachi nkịtị mgbe e mesịrị. Naanị ịnụ ụtọ oge gị na iPad gị, mana gbalịsie ike ka ị ghara ichefu passcode ma ọ bụ mee ka ngwaọrụ gị nwee nkwarụ ọzọ.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ịdịghị mma icheta ụyọkọ nọmba, dị ka password nke gị Akaụntụ Apple, Ihuenyo passcode, Ma ọ bụ ndị paswọọdụ akaụntụ gị Amazon, eBay ma ọ bụ Uber, ị nwere ike ịnwale Tenorshare 4uKey - Paswọdu Manager ilekọta okwuntughe ndị a nke ọma.
[Tụkwasa obi na komputa a] Otu esi atụkwasị obi na kọmpụta a na iPhone enweghị nkwarụ
[Kpọghe iPhone] iPhone kpọghee ekwt a iPhone nwere nkwarụ na / na-enweghị iTunes & iCloud
Zụtara m iPad ejiri rụọ - esi ehichapụ iPad na-enweghị passcode
Nwekwara ike ịgụ
Tọgharia iPhone na-enweghị Apple ID Ọbụna Chọta My iPhone dị
Wepu Apple ID na iPad na-enweghị Paswọdu
Gbanwee Apple ID na iPad Na-enweghị Ọnọdụ Data
Bibie ihe ọzọ Apple ID na My iPhone
Otu esi "Kwado iPhone a"